Taive Pano Nokusingaperi tave pano: Co-op Puzzle Game Kuburitswa - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Kutanga nhasi, Taive Pano Nokusingaperi neTotal Mayhem Mitambo iripo. Inowanikwa paPC, iyo co-op puzzler inokoka vatambi kuti vadzokere kuCastle Rock kune dzimwe mhinduro dzakamirirwa kwenguva refu uye imwe imwezve yekutiza - kana kuti tariro zvakadaro..
Nhasi inguva yechokwadi, uye yave nguva yekudzokera muCastle Rock muTanga Ari Pano Nokusingaperi! Mune ino asymmetrical co-op puzzler, vatambi vachaongorora zvaimbozivikanwa zvikamu zveCastle Rock. Kekutanga munhevedzano yese, vatambi vanozopedzisira vabuda munhare. Vangobuda panze, vanofumura nyaya yeRockbury nevagari vayo, avo vakamboronga kuramba mambo kuti vatize nzvimbo iyi isinganzwisisike.
Akapukunyuka Castle Rock
Tariro inotungamira vatambi kuguva rinotyisa uye vovarega vachidzika mumvura ine rima yenzvimbo yekutanga. Vanodzidza zvakawanda nezvezviitiko zvekare zvakaitika munzvimbo iyi isinganzwisisike. Pavanoyedza kutiza Castle Rock muTanga Tiri Pano Nokusingaperi, vangangotanga kutenda zvavaitya nguva yese: Castle Rock ingazombopukunyuka here?
Epic climax yakamirira vatambi muTanga Ari Pano Nokusingaperi: Mibvunzo yanetsa vatambi muchirongwa cheTaive Pano ichapindurwa muchikamu chechina ichi. Zvinoita here kuti usununguke kubva kuCastle Rock kana kuti igehena hapana anogona kutiza.
Lucia de Visser, mubatsiri-muvambi weTotal Mayhem Games, anodada nekuburitswa uye akafadzwa nemhinduro kusvika parizvino. "Takatanga zvidiki uye tauya kure - nekuburitswa kukuru kutatu, uye nechikwata chakapetwa kaviri muhukuru. Nhasi, mushure memakore maviri nehafu ebudiriro - isingaite panguva yedenda - isu tinofara kuti pakupedzisira tiratidze chirongwa chedu chinoshuvira uye nekunzwa maitiro uye zviitiko zvevatambi vanobva pasirese. Uku ndiko kuchave kugadzirwa kwedu kukuru uye hakusi kupera kwevatambi, tave kutoshanda pamutambo wavo unotevera wekubatana! "
The We were Here game series
Mitambo iri muWe Were Here nhevedzano ye-co-op puzzle adventures inogona kutambwa mune chero kurongeka, kunyangwe paine yakajairika rondedzero tambo inomhanya nemairi. Iyi nhevedzano yakaridzwa nevatambi vanopfuura miriyoni mazana matanhatu nemazana mashanu kubvira Taive Pano pakatangwa muna 2017, uye tese Taive Pano Too uye Takanga Tiri Pano Pamwe takatengesa makopi anopfuura miriyoni paSteam chete.
Vatambi vanotora chinzvimbo chevaongorori veAntarctic vanova vakabatikana mune chakavanzika chinotenderera munzvimbo yeCastle Rock (verenga zvakawanda nezve backstory mune live-chiito vhidhiyo akatevedzana Taive Pano Nhau: Chronicles of Castle Rock). Sezvo vatambi vachifamba vakaparadzana kubva kune mumwe nguva zhinji, vanofanirwa kuongorora nzvimbo dzakati wandei. Nekudaro, yega yega puzzle inogona kugadziriswa chete mukubatana. Mapikicha eAsymmetric anopa mumwe nemumwe ruzivo rwakasiyana, achipikisa vatambi kuti vataurirane uye vaone kuti ndeupi ruzivo rwavanarwo uye kuti rwunotungamira sei kumhinduro. Vatambi havana chimwe chinhu kunze kwehungwaru hwavo, walkie-talkie, uye chero chinhu chavanogona kuwana munzira yavo.
Kuuya izvozvi kuPC uye munguva pfupi iri kutevera kuPlayStation neXbox, Takanga Tave Pano Nokusingaperi yakagadzwa kuve Yese Mehem Mitambo 'mutambo unonakidza zvakadaro. Chikwata chiri kuseri kwezita parizvino chakakura kupfuura nakare kose uye chakashanda nesimba kugadzira mutambo weWe Were Here unodarika iwo akautangira mune ese magirafu uye chiyero. Izvi zvinoita kuti Takanga Tave Pano Nokusingaperi ese ari maviri makuru uye ane graphical epamusoro mutambo munhevedzano, iine nyika mhenyu izere neruzivo rwakanaka uye anopfuura makumi maviri nemaviri-nyowani mapuzzle. Kunyangwe vane ruzivo vanogadzirisa puzzle vanogona kutarisira kupfuura maawa gumi nemaviri ekunakidzwa.
Megaport High End Gaming PC Intel Core i9-12900F 16 musimboti kusvika... * 2.389,00 EUR tenga
Kare Ynaros Fallin ': Mutambo webhodhi nezve shamans muna 2022 paKickstarter
Inotevera Fifa 23 seyekupedzisira: EA uye mubatanidzwa wepasirese mune ramangwana vaimbova shamwari
Jon Shafer's At The Gates zano mutambo uripo
Wina zvipoko: Mutambo wevana vaZoch "Ab durch die Mauer" naJürgen Adams anogamuchira "innoSPIEL"
Marvel United: CMON ichatangisa Heroes Board Game munguva pfupi iri kutevera paKickstarter